Hoteellada Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Hoteellada gudaha Pathanamthitta
Hoteellada gudaha Kerala
Hoteellada gudaha Belves
Hoteellada gudaha Dordogne
Hoteellada gudaha Bad Driburg
Hoteellada gudaha Cadouin
Hoteellada gudaha Estagel
Hoteellada gudaha Bagni Di Lucca
Hoteellada gudaha Toronto
Hoteellada gudaha Ontario
1 - 10 ee 760 Liisaska
Iib | 50200 Sq Ft
Waxa daabacay Keekkadan PM Pvt. Ltd.
arag Hoteellada la daabacay 11 months ago
Waxa daabacay David Evans
arag Hoteellada la daabacay 5 days ago
Waxa daabacay Ruediger Holey
arag Hoteellada la daabacay 6 days ago
Waxa daabacay Annette Reeve
arag Hoteellada la daabacay 1 week ago
Waxa daabacay Νίκος Τσούσης
Waxa daabacay Νίκος Χριστόπουλος
Waxa daabacay Karen Roos
Waxa daabacay Jessica Hammell
Hoteelku waa hay'ad bixinaysa hoy kubixin mushahar ku saleysan waqti-gaaban. Xarumaha la soo bandhigi karo waxay ka koobnaan karaan joodariga tayada leh oo qol yar leh iyo qolal waaweyn oo leh sariiro tayo sare leh, gogosha, qaboojiyaha iyo tas-hiilaadka kale ee jikada, kuraasta dharka sare leh, telefishanka guriga lagu dhejiyo iyo musqulaha dharka lagu buuxiyo. Hoteelada yaryar, qiime jaban ayaa bixin kara kaliya adeegyada iyo xarumaha martida ee asaasiga ah. Hoteelada waaweyn, qiimaha sare ayaa laga yaabaa inay bixiyaan tas-hiilaad marti ah oo dheeri ah sida barkadda dabaasha, xarunta ganacsiga (oo leh kumbuyuutar, maktabado iyo qalab xafiis), xanaano caruur, shirarka xafladaha iyo munaasabadaha, teniska ama maxkamadaha kubbadda koleyga, jimicsiga, makhaayadaha, dalxiiska maalinta iyo bulshada adeegyada waxqabadka. Qolalka hoteelka badanaa waa lambarro (ama lagu magacaabaa hudheelo yaryar iyo B & Bs) si loogu oggolaado martida inay gartaan qolkooda. Qaar ka mid ah huteellada, hudheelada dhaadheer ee sareeya ayaa leh qolal lagu qurxiyo. Hoteelada qaarkood waxay bixiyaan cunto qeyb ka mid ah qolka iyo diyaarinta guddiga. Boqortooyada Ingiriiska gudaheeda, hudheel ayaa sharcigu uga baahan yahay inuu cunno iyo cabitaan siiyo dhammaan martida gudaheeda saacado cayiman. Japan gudaheeda, huteelada kaabsalku waxay bixiyaan qol yar oo ku habboon hurdada iyo xarumaha musqulaha oo la wadaago.